Uhlaselo lobugrogrisi lwase-Oslo: Ipolisa lenzakele, umhlaseli oxhobileyo wabulawa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseNorway zokuPhula » Uhlaselo lobugrogrisi lwase-Oslo: Ipolisa lenzakele, umhlaseli oxhobileyo wabulawa
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Iindaba zaseNorway zokuPhula • abantu • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Uhlaselo lwemela e-Oslo: Ipolisa lenzakele, umhlaseli wabulawa.
Akukaziwa ukuba yintoni injongo yomrhanelwa, nangona, ngokutsho kwabo bazibonela ngawabo amehlo, le ndoda yakhwaza “Allahu Akbar” (uThixo mkhulu) ebudeni bohlaselo.
Indoda enganxibanga shirt ihlasela abahlali baseOslo ngemela enkulu ngelixa bekhwaza "Allahu Akbar".
Umhlaseli uye wagilana nepolisa emotweni waza wadutyulwa lelinye ipolisa.
Umhlaseli ophambeneyo kuthiwa ufike eNorway evela kumazantsi eRashiya eChechnya.
Oslo Ipolisa lenzakele xa indoda enxibe ihempe, ikrazula imela enkulu, ihlasela abahlali bekomkhulu laseNorway emini emaqanda, phambi kokuba idutyulwe yabulawa ngamagosa omthetho.
Imifanekiso kunye neefoto ekwabelwana ngazo kwi-Intanethi zibonisa inqwelo-mafutha yonyanzeliso lomthetho igqogqa indoda engenahempe kwikomkhulu laseNorway njengoko ikhupha imela kwaye kubikwa ukuba isoyikisa abantu abadlulayo.
Emva kokujulwa ngasemva yimoto yamapolisa, imela ikwazile ukubuyela ezinyaweni zayo yavula ucango lomkhweli wesithuthi samapolisa. Ngelo xesha, wabonakala engqubuzana negosa elalihleli phambi kokuba umntu asebenza naye aphume ephethe umpu, edubula umhlaseli.
Umphathi wamapolisa aseNorway, uTorgeir Brenden, uthe le ndoda ibizilungiselela ukuhlaba omnye umntu xa imoto yamapolisa imgila. “Wayesele eza kuhlasela abantu esitratweni xa amapolisa eza amisa,” utshilo uBrenden.
“Kubandakanyeke abantu ababini, yaye amapolisa abahoya kangangoko anako,” watsho umphathi wamapolisa engachazanga nto. Kuyaqondakala ukuba kukho igosa lonzakele kodwa hayi kakhulu. UBrenden uthe akukho mntu wumbi wonzakeleyo kodwa wongeze ukuba “sinokucinga ukuba wayezimisele ukuhlasela ngakumbi.”
Amapolisa aqinisekise ukuba esi sehlo senzeke ngentsimbi yesithoba kusasa kwindawo yaseBislett Oslo. Imeko yomrhanelwa ayikaqinisekwa nangona ezinye iingxelo zithi ubhubhele kwindawo yexhwayelo.
Ngokwamajelo eendaba aseNorway, imela yagwetywa ngoDisemba 2020 ngokwenza olunye uhlaselo lwemela lwe-semi-ze ngoJuni 4, 2019. Umhlaseli, ekubikwa ukuba wakhwaza 'Allahu akbar' ngexesha lohlaselo luka-2019, wothuswa ngumpu wamapolisa wabanjwa. Wagwetyelwa ukhathalelo lwempilo yengqondo olusisinyanzelo kunye nesohlwayo. Le ndoda yakhulela kwiriphabliki esemazantsi eRashiya eChechnya.
Uhlaselo luza emva kwesiganeko eCannes, Fransi ngoMvulo, xa indoda eyayixhobe ngemela yavula ucango lwemoto yamapolisa yaza yahlasela elinye lamapolisa amathathu awayengaphakathi. Imela, ekwakusithiwa yathetha okuthile ngalo “mprofeti,” yadutyulwa lelinye lamagosa. Elinye ipolisa lenzakele.
Ngo-Okthobha, ikholwa elingumSilamsi labulala abantu abahlanu ngokudubula nangentolo kwidolophu yaseNorway yaseKongsberg.